Why ExactTarget na CoTweet Na-eme Sense | Martech Zone
Na mbụ amụrụ m ntakịrị ụjọ, Kpọọ ngwa ahịa na CoTweet? Email na Twitter? Ọ dị ha ka ụmụ nwanne nne m dị anya, enwetaghị m ya.
N'abalị a, agwara m Chris Baggott, onye na-akwado ya Kpọmkwem Ngwaọrụ ma ugbu a CEO nke Compendium Blogware. Chris enweghị ike ikwu oke ihe banyere ịkwaga ahụ, nwere nnukwu obi ụtọ maka Scott Dorsey… wee kọwaa etu o si bụrụ ihe ezi uche dị na ya:
Email na Twitter adịghị ka ibe ha. Ha abuo choputara ha na uzo nkwanye ugwu.
CoTweet bụ usoro njikwa azụmaahịa maka Twitter, ExactTarget bụ usoro azụmaahịa email nke ụlọ ọrụ. Azụmaahịa ndị dọtara mmasị na nke ọ bụla bụ atụmanya maka ibe ha.
CoTweet na Medialọ nyocha Social Media nye Siliọka Companylọ ọrụ ndagwurugwu nwere ọhụụ nke Silicon Valley.
CoTweet na-enye ohere ExactTarget ka ọ banye n'ime Social Media na-enweghị nnukwu ihe egwu ma ọ bụ ụgwọ nke ịzụta otu n'ime ngwa ndị ọzọ na-elekọta mmadụ n'ebe ahụ.
Ọ bụ nnukwu ụzọ maka ExactTarget iji gbanye mkpịsị ụkwụ ya na mgbasa ozi mmekọrịta. Fọdụ nwere ike ịrụ ụka na email bụ usoro mmekọrịta mbụ… Enweghị m ike ịrụ ụka na nke ahụ. Ana m atụ anya ịhụ ihe na-esote na ExactTarget na enwere m obi ụtọ na CoTweet ugbu a nwere mgbọrọgwụ na Indianapolis! Obi dịkwa m ụtọ na agaghị rebranded ExactTweet! 🙂
Obi dịkwa m ụtọ maka Scott Dorsey! Scott bụ onye m gbara ajụjụ ọnụ na ExactTarget n'oge mmalite - ọ nweghịkwa mgbe ọ kwụsịrị inwe mmasị, ịnụ ọkụ n'obi na obi ụtọ maka ụlọ ọrụ ahụ. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ isi mbụ na ọtụtụ ndị na-abịa! Ekele ExactTarget na CoTweet!
Tags: Ugboro abụọkpachaara anyaakwụkwọ ọgụgụ scott
Real-Oge Mbipụta na Search
Mar 4, 2010 na 11: 40 AM
Nchọpụta na-akpali mmasị, Doug. Kedu ka ị si hụ ET na-akpata ego na CoTweet?
Mar 4, 2010 na 6: 38 PM
Industrylọ ọrụ email, dịka ị maara, nwere agbanweela ntakịrị ihe n’ime afọ ole na ole gara aga. Ndị na-elekọta gị bụ otu n'ime mmadụ ole na ole ghọtara na ndị na-ere ahịa achọghị ịgbakwunye ọrụ ọzọ - ha chọrọ iwelata ọrụ ha ma mee ka atụmatụ ha dị mfe. Anyị na-agbanye ha ọwa ọhụrụ - nke a na-achọkwa akpaaka, na ngwaọrụ dị mfe.
Echeghị m na ọ bụ ihe gbasara ExactTarget na-akpata ego karịa ịgbachitere ego ha na-akpata ugbu a. Enwere ohere iji rụọ ọrụ na ịzụlite mkparịta ụka maka ndị na-ere ahịa iji jikwaa nkwupụta niile na-ekwupụta, nkwenye ikike. Ọ bụrụ na ExactTarget adịghị agbanwe, ha agaghị agagide uto. Nke a bụ nzọụkwụ na ntụziaka ahụ.
Mar 9, 2010 na 8: 42 AM
Kwetara. Anyị akpọwokwa ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na mpaghara ebe a “Silicon Prairie.” 🙂
Nnweta CoTweet bụ ihe na-atọ ụtọ ma ozugbo teknụzụ jikọtara ọnụ, anyị ga-ahụ ihe ọ na-enweghị onye ọzọ nwere ike ịnye maka usoro nkwukọrịta mmekọrịta.